Thwebula AppLock 2.16.3 – Vessoft
AppLock – a isofthiwe kuvimbela ukufinyelela amafayela kanye nezicelo ngokusebenzisa iphasiwedi. AppLock kwenza wasibekela isibonelo ingcaca noma iphasiwedi yokukhiya amafolda, igalari amafayela emidya, oxhumana nabo, isiphequluli, imenyu ye idivayisi, ukufinyelela uxhumano lwe-inthanethi, njll AppLock uyakwazi ukushintsha indawo ezinombolo ilokhi yekhiphedi izikhiye ukuze kugwenywe peeping yabanye iphethini ingcaca noma iphasiwedi. Isofthiwe ikuvumela ukusetha umbuzo wokuphepha kanye nempendulo ukuze alulame ukufinyelela uma kwenzeka izimo ezingalindelekile. AppLock inikeza anhlobonhlobo themes for iphethini sokuqhafaza.
Ukuvinjwa of sezithunywa amaklayenti imeyili
Ukuvikelwa Iphasiwedi of amafayela emidiya
Kuvimbela ukufinyelela uxhumano lwe-inthanethi
Imisa iphasiwedi imenyu izilungiselelo
Connection izici premium
Amazwana on AppLock:
AppLock Ahlobene software:
English, Українська, Français, Deutsch... Swamp Attack 2.0